ဤရွေ့ကားကျောင်းမှနောက်ကျောများအတွက်အကောင်းဆုံးအမေဇုံအပေးအယူ | Gadget သတင်း
စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောနွေရာသီပြီးနောက်ကျောင်းသို့ပြန်ခြင်းသည်လူတိုင်းအတွက်အထူးသဖြင့်အိမ်ရှိကလေးငယ်များအတွက်မလွှဲမရှောင်သာအဖြစ်မှန်ဖြစ်သည်။ သို့သော်ယခုနှစ်တွင်ကျောင်း၊ အထက်တန်းကျောင်းသို့မဟုတ်တက္ကသိုလ်သို့ပြန်လာခြင်းသည်ကျေးဇူးတင်စရာကောင်းသည် ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်နိုင်အောင်ယူရိုငွေများစွာချွေတာနိုင်စေရန်အမေဇုံပြင်ဆင်ထားပြီးဖြစ်သည်.
ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အမေဇုံမှယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောများစွာသောအစိတ်အပိုင်းများကိုပြသရန်လိုသည်။ ၎င်းသည်အဓိကအားဖြင့်လက်ပ်တော့ပ်များ၊ တက်ဘလက်များ၊ ပရင်တာများ၊ သိုလှောင်ရေးကိရိယာများနှင့်ကျောင်းသို့ပြန်လာသည့်အာမခံချက်များနှင့်ရင်ဆိုင်ရမည့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအသုံးအဆောင်များကိုအဓိကထားသည်။
2 Tablet အရောင်းအ ၀ ယ်
လက်တော့ပ်များသည်မကြာသေးမီကတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများအတွက်သာမကမည်သည့်ကျောင်းသားနီးပါးအတွက်မဆိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ သူတို့အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်တယ်၊ စာသင်ခန်းထဲမှာမှတ်စုတွေယူနိုင်တယ်၊ ဒါမှမဟုတ်ကွန်ယက်ကနေတဆင့်အလွန်အသုံးဝင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်အမြောက်အများနဲ့တိုင်ပင်နိုင်တယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စျေးနှုန်းကိုစိတ်ဝင်စားမှုလျော့ကျစေသည် Acer Aspire One CloudBook ၁၁, ပေါ့ပါးပေါ့ပါးသည့် laptop တစ်လုံး၊ ၎င်းတွင်အတွင်း၌ Windows 10 ထည့်သွင်းထားသည် ဈေးနှုန်းကတော့ ၁၈၃.၈၅ ယူရိုဖြစ်ပြီးအရမ်းဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုပါ။
ဒီလက်တော့ပ်ကသင့်ကိုမယုံလျှင်၊ များစွာသောအချို့ကိုသင်အမြဲရွေးချယ်နိုင်သည် Google ChromeBooks အမေဇုံမှတဆင့်ရရှိနိုင်ပါသည်။
အကယ်၍ သင်ရှာဖွေနေသည်မှာစွမ်းအင်ပိုမိုကောင်းမွန်ပြီးပိုမိုကောင်းမွန်သောအရင်းအမြစ်များရှိသောလက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုဖြစ်ပါကကြီးမားသော virtual store သည်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအခြားရွေးချယ်စရာနှစ်ခုပေးထားသည်။ သူတို့ထဲကပထမဆုံးကတော့သူပဲ Acer Aspire အီး 15, 8 GB RAM နှင့် 7410 TB သိုလှောင်မှုနှင့်အတူ AMD A4-1 quad-core ပရိုဆက်ဆာတပ်ဆင်ထားသည့် laptop တစ်လုံး။
အထက်တွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်တို့သည်မိမိကိုယ်ကိုစစ်မှန်သောဘက်စုံအလှည့်အပြောင်းတစ်ခုအဖြစ်တွေ့ရှိရသည် Acer Aspire E5-573G။ တစ်ခုနှင့်ရေတွက်ပါ Intel Core i7 5500U ပရိုဆက်ဆာ၊ ၈ GB RAM နှင့် ၅၀၀ GB Internal Storage ငါတို့ကတကယ့်သားရဲနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်ဆိုတာပြတယ်။
ယင်း၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချလိုက်ပြီးလာမည့်စာသင်နှစ်အတွက်စာအုပ်များအတွက်သင်သုံးနိုင်သည့်ယူရို ၃၀၀ ထက်မပိုသောဈေးနှုန်းဖြင့်လျှော့ချထားသည်။
စာသင်ခန်းတွင်းနှင့်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုရန်အတွက်တက်ဘလက်သည်မည်သည့်ကျောင်းသားမဆိုအတွက်အကောင်းဆုံးပင်ပန်းနွမ်းနယ်သောအဖော်ဖြစ်နိုင်သည်။ စွမ်းအင်အမျိုးမျိုးနှင့်အထူးသဖြင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည့်ကိရိယာအမြောက်အမြားမှလည်းရွေးချယ်နိုင်သည်။ နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို Amazon ကစျေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ကမ်းလှမ်းတဲ့ပစ္စည်းအချို့ကိုပြပါမယ်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့ Amazon ကသူ့ရဲ့ရောင်းအားအကောင်းဆုံးပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ပြသမှုကိုပြချင်ခဲ့တယ် အမေဇုံမီးဘေး, ၇ လက်မအရွယ်တက်ဘလက်နှင့်မျှတသောအင်္ဂါရပ်များ၊ သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းက ၅၉.၉၉ ယူရိုဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သောစွမ်းအားမြင့်ကိရိယာများကိုကျွန်ုပ်တို့ရှာဖွေသောအခါ Samsung ၏ Galaxy Tab ကိုတစ်ဦးက ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းပါတယ် ၉.၇ လက်မမျက်နှာပြင်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ကောင်းမွန်သော quad-core ပရိုဆက်ဆာနှင့် 9.7 GB RAM တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်.
ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်၏ဒါရိုက်တာကုမ္ပဏီကသူ၏ဈေးနှုန်းကို ၉ ယူရိုအလွန်အမင်းလျှော့ချခြင်းမရှိသေးသော်လည်း၊ ထိုတက်ဘလက်ကို virtual စတိုးတွင်တွေ့နိုင်သောဈေးနှုန်းသည်အခြားနေရာများတွင်ရောင်းချခြင်းထက်နိမ့်ကျနေသည်မှာအမှန်ပင်။ သင်ကထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေရှိတဲ့တက်ဘလက်တစ်ခုကိုရှာနေမယ်ဆိုရင်ဒီဆမ်ဆောင်းထုတ်ကုန်ကသင့်ကိုယူရို ၁၉၀ နဲ့အဆင်ပြေမှာပါ။
အကယ်၍ လက်ပ်တော့ပ်နှင့်တက်ဘလက်သည်ကျောင်းသို့ပြန်သွားရန်မရှိမဖြစ်လိုအပ်ပါကကျွန်ုပ်တို့၏မှတ်စုများ၊ စာတမ်းများသို့မဟုတ်အခြားစာရွက်စာတမ်းများကိုပုံနှိပ်ရန်ပရင်တာတစ်ခုရှိခြင်းသည်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒါကြောင့်အမေဇုံကကျွန်တော်တို့ကိုဒီအမျိုးအစားပစ္စည်းတွေကိုအရည်ရွှမ်းတဲ့အထူးလျှော့စျေးတွေနဲ့ကမ်းလှမ်းပေးတဲ့အတွက်ပရင်တာတစ်ခုရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတာသေချာသွားမှာပါ။
HP သည်ပရင်တာအများဆုံးရောင်းချသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်ခွင့်ရသည့်အတွက် Amazon သည်ပရင်တာ၏စျေးနှုန်းကိုလျှော့ချရန်မတွန့်ဆုတ်ခဲ့ချေ။ HP က DeskJet 3630, ကျွန်တော်တို့ကိုစာရွက်စာတမ်းများကို print ထုတ်ဖို့ခွင့်ပြုပေမယ့်စကင်ဖတ်သို့မဟုတ်မိတ္တူကူးခွင့်ပြုထားတဲ့ inkjet ပရင်တာ။
ဒီပရင်တာ၏ကြီးမားသောကောင်းကျိုးများတစ်ခုဖြစ်သည် ယူရို ၃၉.၉၀ ဖြင့်ခေတ္တဆည်းပူးနိုင်သည်။ ၎င်းသည်မည်သည့်မိုဘိုင်းစက်သို့မဟုတ်တက်ဘလက်မှမဆိုပုံနှိပ်နိုင်သည်။ အဖိုးထိုက်သည်မှာကျွန်ုပ်ရုံးရှိကျွန်ုပ်အလုပ်လုပ်သည့်ပရင်တာရှိသော်လည်းဟုတ်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်သည် Amazon ၌ရှိသည့်တန်ဖိုးထက်နှစ်ဆနီးပါးကုန်ကျသည်။
သင်ပိုမိုပြည့်စုံသောပရင်တာလိုအပ်လျှင် Jeff Bezos အောင်မြင်စွာလည်ပတ်သောကုမ္ပဏီသည်လည်းကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည် Epson WF-2630WF မြန်တဲ့အမြန်နှုန်းနဲ့စာမျက်နှာအမြောက်အများကိုပုံနှိပ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်ဤစက်သည်သင့်အားစာရွက်စာတမ်းများကိုဖက်စ်ဖြင့်စကင်ဖတ်ရန်၊ ကူးရန်၊ သင်သည်သင်၏ရုံးသို့မဟုတ်ရုံးအတွက်ဘက်စုံကိရိယာကိုရှာဖွေနေသည်ဆိုပါကဤပရင်တာသည်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
မကြာသေးမီအချိန်အထိမည်သူမျှသို့မဟုတ်မည်သူမျှနီးပါးသည်လူတန်းစားတွင်သိုလှောင်ရေးကိရိယာရှိရန်မလိုအပ်သော်လည်း၊ ဥပမာ၊ ဒီဂျစ်တယ်အဖြူရောင်ဘောင်များမြင်ကွင်းပေါ်၌ဤစက်အမျိုးအစားသည်လုံးဝလိုအပ်လာသည်။ ဥပမာ၊ သူတို့တွင်တာ ၀ န်ရှိသောဆရာသည် Power Point တင်ဆက်မှုများမှတဆင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အတန်းများကိုစောင့်ရှောက်သည်သို့မဟုတ်ဘာသာရပ်၏နေ့စဉ်ဘဝကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်လိုအပ်သောမှတ်စုများကိုပေးသည်။
သိုလှောင်မှုပမာဏကဲ့သို့သောကြီးမားသော microSD ကဒ်သည်သင့်ကိုကူညီနိုင်သည် 128GB Samsung EVO ၇၀% လျှော့စျေးဖြင့် Amazon ကို ၀ ယ်ယူနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ သိုလှောင်မှုနည်းသောအခြားဗားရှင်းများကိုလည်း microSD ကဒ်ပြားပေါ်တွင်မလိုအပ်သောဖျော်ဖြေမှုများမလိုအပ်သူများအတွက်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ကပိုပြီးရိုးရာပစ္စည်းတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်၊ SanDisk Ultra Dualကျွန်တော်တို့ကိုလုံလောက်သောသိုလှောင်မှုကိုပူဇော်သက္ကာဘို့အပြင် ၎င်းကိုဆိုလိုသည့်အားသာချက်များနှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းသို့မဟုတ်တက်ဘလက်အားလုံးနီးပါးအား၎င်းကိုဆက်သွယ်ခွင့်ပြုသည်။ ၁၆.၉၅ ယူရိုနဲ့ ၀ ယ်လို့ရပါတယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့မှာသိုလှောင်မှုအလုံအလောက်ရှိမရှိစဉ်းစားစရာမလိုဘဲမည်သည့်စာရွက်စာတမ်းနှင့်ဖိုင်ကိုမဆိုသိုလှောင်ရန် hard disk ကိုသုံးနိုင်သည်။ အမေဇုံကကျွန်တော်တို့ကိုကမ်းလှမ်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေထဲမှာကျနော်တို့ကိုရှာ တိုရှီဘာ Canvio အခြေခံ သိုလှောင်မှု ၅၀၀ GB နဲ့ဗားရှင်း ၃၉.၉၀ ယူရိုကို ၀ ယ်နိုင်တယ်။ ထို့အပြင်အလွန်သက်သာသည့်စျေးနှုန်းအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည် 39.90 သို့မဟုတ် 500 TB ဗားရှင်းများကိုလည်းဝယ်ယူနိုင်သည်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကဏ္ come သို့ရောက်ရှိလာပြီး၎င်းမှာအသုံးပြုရန်အတွက် mouse မပါဘဲလက်ပ်တော့ပ်တစ်ခုသို့မဟုတ်ကီးဘုတ်မရှိဘဲတက်ဘလက်တစ်ခုလုံးမှအကျိုးအပြည့်အဝရရှိရန်အတွက်အလွန်အဓိပ္ပာယ်မရှိပါ။ အမေဇုံကဆက်စပ်ပစ္စည်းတွေအကြောင်းစိတ်ပူနေပြီးဒီအလယ်တန်းထုတ်ပစ္စည်းတွေအတွက်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတွေပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ကိစ္စတော်တော်များများမှာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်ပြီးတစ်ခါတစ်ရံမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။
ကျနော်တို့ကမ်းလှမ်းမှုများကိုပြန်လည်သုံးသပ်, ကြိုးမဲ့ mouse ကိုကြည့်ယူ။ စတင်ခဲ့သည် Logitech M187, အသေးငယ်ဆုံး၏တစ် ဦး ဂရုတစိုက်ဒီဇိုင်းနှင့်အတိုင်းအတာရှိပါတယ်။ ၎င်း၏စျေးနှုန်းကိုယူရို ၁၀.၉၀ ဖြင့်သတ်မှတ်ထားပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ဒီစက်ကိုရှာတွေ့နိုင်တဲ့ပုံမှန်စျေးနှုန်းနဲ့နှိုင်းယှဉ်လျှင် ၅၀% နီးပါးသက်သာစေသည်။.
အကယ်၍ သင်ဟာတက်ဘလက်ကိုပုံမှန်တက်နေလျှင် Android သို့မဟုတ် iOS လည်ပတ်ရေးစနစ်ပါရှိပါကမြန်နှုန်းပြည့်မှတ်စုများကိုမှတ်သားရန်ကြိုးမဲ့ကီးဘုတ်လိုအပ်လိမ့်မည်။ The အလွန်ပါးလွှာသော 1byone ၎င်းသည်သင့်အားအနည်းငယ်သာကုန်ကျမည်ဖြစ်ပြီး၎င်းသည် ၂၈၀ mAh ဘက်ထရီကြောင့်သင့်အားကိုယ်ပိုင်သင်ကြားမှုကိုပေးလိမ့်မည်၊ ပြီးပြည့်စုံသည့်အတန်းများစွာကိုတက်ရန်သင်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုဖြစ်နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့အမေဇုံမှကျောင်းသို့ပြန်သွားရန်ကမ်းလှမ်းသောကမ်းလှမ်းချက်များနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်ကိုပိတ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျောပိုးအိတ်ကဲ့သို့သောမည်သည့်ကျောင်းသား၏ဂန္တ ၀ င်ဂန္ထဝင်များကိုမှမမေ့နိုင်ပါ။ ကျောပိုးအိတ်တစ်စုံတစ်ခုရွေးချယ်ခြင်းသည်များသောအားဖြင့်အလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ထောက်ခံရန်ရဲရင့်ခြင်းရှိပါလိမ့်မည် Targus CN600 သင့်လက်တော့ပ်အပါအ ၀ င်သင်လိုအပ်သမျှကိုလက်တွေ့သိမ်းဆည်းနိုင်သည်။
လတ်တလောတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည် Amazon မှတစ်ဆင့် ၃၀.၇၀ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။ အကယ်၍ ပုံမှန်စျေးနှုန်းသည်ယူရို ၆၀ ၀ န်းကျင်ရှိပါကကြီးမားသော virtual store သည်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသည့်အရာသည်လက်တွေ့အားဖြင့်အစားထိုးမရနိုင်ပါ။
အမေဇုံသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ထိပ်တန်းအွန်လိုင်းစတိုးတစ်ခုဖြစ်သည်။ စပိန်တွင်၎င်း၏တိုးတက်မှုနှင့်ရောင်းအားသည်တိုးပွားလာသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့် ၄ င်း၏ထုတ်ကုန်အချို့အပေါ်စျေးကွက်မြှင့်တင်ခြင်းနှင့်လျှော့စျေးပေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဂျက်ဖ်ဘီဇို့စ်မှညွှန်ကြားသောကုမ္ပဏီမှအဆိုပြုထားသောကျောင်းကမ်းလှမ်းချက်များမှာအချို့သောကိစ္စရပ်များတွင်များသောအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကိုအမြန်ဆုံးအားသာချက်ယူရန်သာကျွန်ုပ်တို့အားပေးနိုင်သည်။
Amazon မှကျွန်ုပ်တို့ကျောင်းသို့ပြန်ပို့ရန်ကမ်းလှမ်းမှုအချို့ကိုသင်အသုံးချခဲ့ပါသလား။။ ဤစာမူ၏မှတ်ချက်များအတွက်မည်သည့်နေရာများမှမည်သည့်အရာများကိုသင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရှိနေသောလူမှုရေးကွန်ယက်များထဲမှတစ်ခုနှင့်မည်သည့်နေရာတွင်တွေ့နိုင်ကြောင်းနှင့်ကြီးမားသော virtual စတိုးများကကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းနိုင်သည့်ကမ်းလှမ်းမှုများကိုမည်သည့်နေရာတွင်ပြမည်နည်းကိုပြောပြပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » အမေဇုံ » ဤရွေ့ကားကျောင်းသို့ပြန်အဘို့အအကောင်းဆုံးအမေဇုံအပေးအယူဖြစ်ကြသည်
Angeles မြို့။ ဟုသူကပြောသည်
ဤသူတို့သည် အကယ်၍ လေးနက်မှုရှိပါကမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုသိုလှောင်ထားသည်